Isikhungo se-Command & Firefighter - Ukubonisa okulula okuningana - izimpawu zeDijithali
Isikhungo se-Command & Isicishamlilo
Njengesicishamlilo, udinga ukuqapha isoftware yanamuhla ngqo kwi-videowall yakho
Yiba phakathi kwamaphayona ngokusebenzisa iWindows 10 Video Wall, uthole ama-acces ngokushesha kwisoftware yakho yobuchwepheshe, thola ividiyo ebukhoma ye-drone nokunye okuningi
Ukuphathwa kwezinhlekelele kuyinkimbinkimbi, akulindelekile, futhi kudala izimo ezinengcindezi ephezulu. Njenge isibhamu somlilo udinga ulwazi ngokushesha futhi uncike ekuqinisekisweni ukuthi amaqembu ayaqaphela futhi asebenza ngokubambisana. Isikhathi sibucayi futhi amaphutha ayabiza. Lokhu kuhluka kwesimo kuyizindlela lapho izikhungo zezingcingo eziphuthumayo kanye namaqembu abo kufanele bahlole usuku ngalunye ukuqinisekisa ukuthi bayakwazi ukusiza labo abasengozini enkulu.
Landa isifundo sethu secala (EN)
Landa isifundo sethu secala (FR)
EFrance, "i-CTA-Codis", noma i- "Salle du 18", iyigumbi lomyalo eliphakathi nendawo lapho yonke imisebenzi yezimo eziphuthumayo ifuna umnyango wezomlilo uqondiswe khona. Kulamaqembu umzabalazo wokuphatha izingcingo ezingaphezulu kwezingama-400 ngosuku, ukuqondisa abasebenzi bezimo eziphuthumayo kanye nokuxhumanisa imininingwane kudale izimo eziyinkimbinkimbi lapho ulwazi olubalulekile lungafinyeleli kulabo abaludinga ngokushesha okwanele. Isikhungo sabo somyalo abacimi bomlilo zivame ukushiywa zikhungathekile futhi zikhungathekile ngokusiza lokhu kuxhumana.
Yilapho i-Easy Multi-Display iphakamise khona ifayela le- isisombululo esisha ukusiza ekuvuseleleni ukwabiwa kolwazi ngaphakathi kwalawa magumbi okulawula. Isungulwe ngokufakwa kwangaphambilini ngaphakathi kwe-CTA-Codis, lesi sixazululo esihlukile sinikeza abasebenzisi bokugcina ulwazi oluphakeme, olungenamthungo. Ukwakha udonga lwevidiyo oluyingqayizivele ukubhekela izidingo zalezi zikhungo zemiyalo kusho ukuthi izinduna ziyakwazi ukwabelana ngolwazi ngokushesha futhi zithathe ukunaka kwethimba lonke lekamelo lokulawula.
Lungela ukusebenzisa Izinhlelo Zokugcina ezihamba phambili ...
Etholakala ngaphambili kwegumbi lomyalo, ividiyo eyenziwe ngokwezifiso ibonisa zonke izikrini ezifanele nezibalulekile ukusiza ekwaziseni amaqembu; UGeo Artemis, Amakhamera Wezokuphepha, Amakhamera Omzimba, Imibiko ebukhoma yezindaba, Futhi Iziteshi Zomphakathi. Ukwenza ngokwezifiso nokufakwa kwalolu donga lwevidiyo kusho ukuthi ulwazi luyatholakala futhi lubonakala ngaso sonke isikhathi, lusiza ekuphathweni kwansuku zonke kanye nanoma yiziphi izimo ezibucayi ezivelayo. Ngokulawula izinduna ezikwazi ukushintsha ngokushesha ukubonisa noma ukubuka konke kodonga lwevidiyo, Isixazululo se-EMD sinikeza ukuguquguquka kwethimba futhi kusho ukuthi izinhlelo ziyakwazi ukukhula nokuzivumelanisa nezidingo zesikhungo.
Rekhoda, xhumana, futhi uhlaziye ngesikhathi sangempela. Lokhu kufakwa okusha kwe-EMD ngaphakathi kwe-CTA-Codis akugcini nje ngokusiza ukuphathwa kwezimo ngaphakathi kwegumbi lomyalo kepha futhi kuzovumela amathuluzi wokuhlola ngemuva kokuphathwa kwesimo. Izicishamlilo ngokukhethekile ziyakwazi ukuhlola okuqoshiwe okwenziwe ngamakhamera omzimba emicimbini bese kunqunywa amaphutha noma impumelelo yokuphathwa. Lokhu kubuya kwesipiliyoni kudala ukufundela okuhle kakhulu okuhle kwamaqembu nabantu ngabanye. Amandla okuhambisa kalula uhlelo lwe-EMD kumasayithi angaphandle noma emagcekeni ngaphandle kwesidingo sokuthengwa kwesoftware entsha noma izikrini kukhulisa ukuzivumelanisa namaqembu, i-EMD iba ngumlingani ophakathi nezikhungo ze-CTA-Codis zokuphathwa kwezinkinga
Izixazululo eziguqukayo, ezisebenzisanayo nezenziwe ngezifiso ubuchwepheshe bethu be-EMD. Ukuphathwa kwezinhlekelele kudinga amasistimu asebenza nethimba lakho esikhundleni sobuchwepheshe obuyinkimbinkimbi obungasebenziseki kalula. Ukwenza lula ukufinyeleleka ngezinhlelo zokuxhumana eziguquguqukayo nezisheshayo kusho ukuthi izikhungo zemiyalo namathimba azo azokwaziswa nganoma yisiphi isimo futhi angenza izinqumo ezinolwazi.
Noma ngabe siphekela amabhizinisi amancane noma amabhizinisi amakhulu sikhipha ingcindezi ekukhombiseni i-multimedia ekubonisweni okuningi. Xhumana nethimba lethu namuhla ukuxoxa ngezixazululo ze-Easy Multi-Display ezenzelwe wena neqembu lakho.
Beka i-WhatsApp noma i-imeyili kumsunguli wethu guy@easy-multi-display.com ukuthola igama le-SDIS futhi uthole ezinye izinkomba.
Yehlisa kakhulu izindleko eziphelele zeVideo Wall
I-TV enkulu eyi-80 inches (2000 euros), i-PC yokudlala (i-1000 euros), i-EMD pro (i-899 euros). Kuyizindleko eziphelele zama-euro angama-3899 ukuthola izici ezingcono kunesixazululo esidala sesikole esikhokhelwa ama-euro angama-30.000. Kuyisibalo sangempela, ngicela ungithinte ukuthola ireferensi yomnyango waseFrance (i-SDIS).
Qopha imicimbi futhi ufunde ekusebenzeni ngakunye
I-EMD inikela ngesici sokurekhoda. Sebenzisa okuhle okwedlule ukuze uthuthukise iqembu lakho.
Thola ukufinyelela kuhlelo lokusebenza lwemfashini
Ngabe ufuna ukukhombisa ividiyo ye-drone khona manjalo, i-web cam noma i-App ethize ebukhoma?
- Ukukhethwa kolimi: English, French, Chinese, Spanish kuyaqhubeka ...